အာဖဂန်ရောက် အမေရိကန်တွေအားလုံး ဘေးကင်းစွာထွက်ခွာနိုင်ရေး သမ္မတဘိုင်ဒင်ကတိပြု
၂၄ သြဂုတ်၊ ၂၀၂၁
အာဖဂန်မှ ထွက်ခွာလာတဲ့ ဒုက္ခသည်များကို အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စု Abdu Dhabi လေဆိပ်တွင် ခတ္တနရောချထားစဉ် (ဓာတ်ပုံ - AFP)
အာဖဂန်နစ္စတန်နိုင်ငံ ကဘူး လေဆိပ်မှာ အခြေအနေတွေ တင်းမာနေချိန်မှာပဲ နိုင်ငံကထွက်ခွာလိုတဲ့ အမေရိကန်တွေအားလုံးကို ဘေးကင်းလုံခြုံရာစီ ပြောင်းရွှေ့းပေးသွားမှာဖြစ်ကြောင်း ဘိုင်ဒန်အစိုးရက ကတိပြု ပြောဆိုပါတယ်။ ဒါ့အပြင် အမေရိကန်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကို ကူညီခဲ့တဲ့ အာဖဂန်တွေကိုလည်း နိုင်ငံတွင်းကနေ ထွက်ခွာဖို့ အကူအညီတွေ ပေးနေပြီး ဒီလို ဆောင်ရွက်ရာမှာ အမေရိကန် လေကြောင်းလိုင်းတွေအနေနဲ့လည်း ကူညီကြဖို့ ညွှန်ကြားထားပါတယ်။ VOA သတင်းထောက် Arash Arabasadi ပေးပို့ထားတဲ့ သတင်းကို ကိုအောင်အောင်က တင်ပြပေးထားပါတယ်။
အာဖဂန်နစ္စတန်မှာ ရောက်နေတဲ့ အမေရိကန်နိုင်ငံသားတွေနဲ့ အတူ အမေရိကန်တပ်တွေကို ကူညီခဲ့တဲ့ အာဖဂန် မိသားစုတွေ အာဖဂန်နစ္စတန်က ထွက်ခွာနိုင်ရေး အမေရိကန် တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေက ကဘူးလေဆိပ်မှာ လေယာဉ်ပေါ် ကူညီ ပို့ဆောင်ပေးနေပါတယ်။ ဒီလိုအရေးပေါ် ကယ်ဆယ်ရေး ဆောင်ရွက်ရာမှာ အမေရိကန်လေကြောင်းလိုင်းတွေအနေနဲ့လည်း အကူအညီပေးကြဖို့ ဘိုင်ဒန်အစိုးရက ညွှန်ကြားထားပြီး ဒီလုပ်ငန်းစဉ် အစဉ်ပြေချောမွေ့ဖို့ လုပ်ဖို့ လိုအပ်တာ အားလုံး လုပ်သွားမှာ ဖြစ်တယ်လို့လည်း ပြောပါတယ်။ သမ္မတ ဂျိုးဘိုင်ဒန်က
အိမ်ပြန်ချင်တဲ့ အမေရိကန်တွေအားလုံး အိမ်ကို ပြန်ရပါစေမယ်။ NATO မဟာမိတ်အဖွဲ့ ၀င် နိုင်ငံသားတွေကိုလည်း နိုင်ငံက ထွက်ခွာနိုင်အောင် အကူအညီပေးနေပါတယ်။
အမေရိကန်တွေနဲ့အတူ ဂျာမဏီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေလည်း ကဘူးလေဆိပ်ကို ရောက်လာပြီး မြို့တော်ကဘူးဝန်းကျင်က ကူညီကယ်ဆယ်ရေး လုပ်ငန်းတွေမှာ ပါဝင်နေပါတယ်။ အတိုက်အခံ ရီပတ်ဘလစ်ကန်တွေကတော့ သမ္မတ ဘိုင်ဒန်ရဲ့ ကိုင်တွယ်ဆောင်ရွက်ပုံတွေနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး ဝေဖန်ပါတယ်။ အထက်လွှတ်တော်အမတ်လည်းဖြစ် စစ်ပြန်တဦးလည်းဖြစ်တဲ့ Joni Ernst က ABC this week အစီအစဉ်မှာ အခုလို ပြောပါတယ်။
ဒီကိစ္စနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး သမ္မတ ဘိုင်ဒန်ရဲ့ ကိုင်တွယ်ပုံတွေဟာ တကယ့်ကို အစီအစဉ်မကျပါဘူး။ ကျမသာ ဒီလိုအခြေအနေမျိုးမှာဆိုရင်တော့ လက်တွဲဖေါ်မဟာမိတ်တွေနဲ့ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လိုက်ရင် အများကြီး အဆင်ပြေချောမွေ့မှာပါ။
အမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေး ၀န်ကြီး Antony Blinken. ကလည်း မဟာမိတ်တွေနဲ့ အတူ လက်တွဲညီညီ ဆောင်ရွက်နေကြောင်း Fox သတင်းဌာနမှာ တနင်္ဂနွေနေ့က ပြောသွားပါတယ်။ ဒီလို ကယ်ဆယ်ရေးဆောင်ရွက်ရာမှာ အခက်အခဲတွေ ရှိပေမယ့်လည်း အဆင်ပြေပြေ ဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့သလို ဂျာမဏီကို ပို့ဆောင်ပေးနေတဲ့ လေယာဉ်ပေါ်မှာဆိုရင် အာဖဂန်အမျိုးသမီး သမီးငယ်တဦးမွေးဖွားတာကိုလည်း ကူညီပေးနိုင်ခဲ့ကြောင်း စစ်ဖက်အစီရင်ခံစာမှာ ဖေါ်ပြထားတာပါ။ အရေးပေါ်ကယ်ဆယ်ရေးဆောင်ရွက်ရာမှာ သမ္မတဘိုင်ဒန်အတွက် အဆင်ပြေပါတယ်ဆိုတဲ့ လမ်း ရွေးချယ်စရာမရှိဘဲ ရသလောက် သတင်းအချက်အလက်ပေါ် အခြေခံ ပြီး အကောင်း ဆုံး ဆောင်ရွက်ခဲ့တာဖြစ်ကြောင်းလည်း ထောက်ပြကြပါတယ်။
အမေရိကန် ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီး Lloyd Austin. က ကျနော်တို့ တင်ပြတာတွေကို သမ္မတက နားထောင်ခဲ့ပါတယ်။ သေချာ စဉ်းစားသုံးသပ်ပြီးမှသာ သူ ဆုံးဖြတ်ချက် ချခဲ့တာဖြစ်ပြီး ဒီဆုံးဖြတ်ချက်ကို ကျနော် ထောက်ခံပါတယ။်
တနင်္ဂနွေနေ့ CBS face the nation. အစီအစဉ်မှာ ဘလင်ကန်က လွန်ခဲ့တဲ့ ၂၄ နာရီအတွင်း အာဖဂန်နစ္စတန်ကနေ လူပေါင်း ၈၀၀၀ လောက်ကို ကယ်ထုတ်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ ပြောပါတယ်။ အာဖဂန်နစ္စတန်က ဘေးကင်းလုံခြုံစွာ ထွက်ခွာနိုင်ဖို့အတွက် အမေရိကန်နဲ့ တာလီဘန် ခေါင်းဆောင်တို့ ဆက်ဆွေးနေတဲ့ တချိန်တည်းမှာပဲ ဒီကယ်ဆယ်ရေးအစီအစဉ်တွေအပေါ် IS အစွန်းရောက်တွေရဲ့ အန္တရာယ်လည်း ရင်ဆိုင်လာရနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
အာဖဂနျရောကျ အမရေိကနျတှအေားလုံး ဘေးကငျးစှာထှကျခှာနိုငျရေး သမ်မတဘိုငျဒငျကတိပွု
အာဖဂနျနစ်စတနျနိုငျငံ ကဘူး လဆေိပျမှာ အခွအေနတှေေ တငျးမာနခြေိနျမှာပဲ နိုငျငံကထှကျခှာလိုတဲ့ အမရေိကနျတှအေားလုံးကို ဘေးကငျးလုံခွုံရာစီ ပွောငျးရှေ့းပေးသှားမှာဖွဈကွောငျး ဘိုငျဒနျအစိုးရက ကတိပွု ပွောဆိုပါတယျ။ ဒါ့အပွငျ အမရေိကနျတပျဖှဲ့ဝငျတှကေို ကူညီခဲ့တဲ့ အာဖဂနျတှကေိုလညျး နိုငျငံတှငျးကနေ ထှကျခှာဖို့ အကူအညီတှေ ပေးနပွေီး ဒီလို ဆောငျရှကျရာမှာ အမရေိကနျ လကွေောငျးလိုငျးတှအေနနေဲ့လညျး ကူညီကွဖို့ ညှနျကွားထားပါတယျ။ VOA သတငျးထောကျ Arash Arabasadi ပေးပို့ထားတဲ့ သတငျးကို ကိုအောငျအောငျက တငျပွပေးထားပါတယျ။
အာဖဂနျနစ်စတနျမှာ ရောကျနတေဲ့ အမရေိကနျနိုငျငံသားတှနေဲ့အတူ အမရေိကနျတပျတှကေို ကူညီခဲ့တဲ့ အာဖဂနျ မိသားစုတှေ အာဖဂနျနစ်စတနျက ထှကျခှာနိုငျရေး အမရေိကနျ တပျဖှဲ့ဝငျတှကေ ကဘူးလဆေိပျမှာ လယောဉျပျေါ ကူညီ ပို့ဆောငျပေးနပေါတယျ။ ဒီလိုအရေးပျေါ ကယျဆယျရေး ဆောငျရှကျရာမှာ အမရေိကနျလကွေောငျးလိုငျးတှအေနနေဲ့လညျး အကူအညီပေးကွဖို့ ဘိုငျဒနျအစိုးရက ညှနျကွားထားပွီး ဒီလုပျငနျးစဉျ အစဉျပွခြေောမှဖေို့ လုပျဖို့ လိုအပျတာ အားလုံး လုပျသှားမှာ ဖွဈတယျလို့လညျး ပွောပါတယျ။ သမ်မတ ဂြိုးဘိုငျဒနျက
အိမျပွနျခငျြတဲ့ အမရေိကနျတှအေားလုံး အိမျကို ပွနျရပါစမေယျ။ NATO မဟာမိတျအဖှဲ့ ဝငျ နိုငျငံသားတှကေိုလညျး နိုငျငံက ထှကျခှာနိုငျအောငျ အကူအညီပေးနပေါတယျ။
အမရေိကနျတှနေဲ့အတူ ဂြာမဏီတပျဖှဲ့ဝငျတှလေညျး ကဘူးလဆေိပျကို ရောကျလာပွီး မွို့တျောကဘူးဝနျးကငျြက ကူညီကယျဆယျရေး လုပျငနျးတှမှော ပါဝငျနပေါတယျ။ အတိုကျအခံ ရီပတျဘလဈကနျတှကေတော့ သမ်မတ ဘိုငျဒနျရဲ့ ကိုငျတှယျဆောငျရှကျပုံတှနေဲ့ ပတျသတျပွီး ဝဖေနျပါတယျ။ အထကျလှတျတျောအမတျလညျးဖွဈ စဈပွနျတဦးလညျးဖွဈတဲ့ Joni Ernst က ABC this week အစီအစဉျမှာ အခုလို ပွောပါတယျ။
ဒီကိစ်စနဲ့ ပတျသတျပွီး သမ်မတ ဘိုငျဒနျရဲ့ ကိုငျတှယျပုံတှဟော တကယျ့ကို အစီအစဉျမကပြါဘူး။ ကမြသာ ဒီလိုအခွအေနမြေိုးမှာဆိုရငျတော့ လကျတှဲဖျေါမဟာမိတျတှနေဲ့ ပူးပေါငျးဆောငျရှကျလိုကျရငျ အမြားကွီး အဆငျပွခြေောမှမှေ့ာပါ။
အမရေိကနျနိုငျငံခွားရေး ဝနျကွီး Antony Blinken. ကလညျး မဟာမိတျတှနေဲ့ အတူ လကျတှဲညီညီ ဆောငျရှကျနကွေောငျး Fox သတငျးဌာနမှာ တနင်ျဂနှနေကေ့ ပွောသှားပါတယျ။ ဒီလို ကယျဆယျရေးဆောငျရှကျရာမှာ အခကျအခဲတှေ ရှိပမေယျ့လညျး အဆငျပွပွေေ ဆောငျရှကျနိုငျခဲ့သလို ဂြာမဏီကို ပို့ဆောငျပေးနတေဲ့ လယောဉျပျေါမှာဆိုရငျ အာဖဂနျအမြိုးသမီး သမီးငယျတဦးမှေးဖှားတာကိုလညျး ကူညီပေးနိုငျခဲ့ကွောငျး စဈဖကျအစီရငျခံစာမှာ ဖျေါပွထားတာပါ။ အရေးပျေါကယျဆယျရေးဆောငျရှကျရာမှာ သမ်မတဘိုငျဒနျအတှကျ အဆငျပွပေါတယျဆိုတဲ့ လမျး ရှေးခယျြစရာမရှိဘဲ ရသလောကျ သတငျးအခကျြအလကျပျေါ အခွခေံ ပွီး အကောငျး ဆုံး ဆောငျရှကျခဲ့တာဖွဈကွောငျးလညျး ထောကျပွကွပါတယျ။
အမရေိကနျ ကာကှယျရေးဝနျကွီး Lloyd Austin. က ကနြျောတို့ တငျပွတာတှကေို သမ်မတက နားထောငျခဲ့ပါတယျ။ သခြော စဉျးစားသုံးသပျပွီးမှသာ သူ ဆုံးဖွတျခကျြ ခခြဲ့တာဖွဈပွီး ဒီဆုံးဖွတျခကျြကို ကနြျော ထောကျခံပါတယ။ျ
တနင်ျဂနှနေေ့ CBS face the nation. အစီအစဉျမှာ ဘလငျကနျက လှနျခဲ့တဲ့ ၂၄ နာရီအတှငျး အာဖဂနျနစ်စတနျကနေ လူပေါငျး ၈၀၀၀ လောကျကို ကယျထုတျနိုငျခဲ့တယျလို့ ပွောပါတယျ။ အာဖဂနျနစ်စတနျက ဘေးကငျးလုံခွုံစှာ ထှကျခှာနိုငျဖို့အတှကျ အမရေိကနျနဲ့ တာလီဘနျ ခေါငျးဆောငျတို့ ဆကျဆှေးနတေဲ့ တခြိနျတညျးမှာပဲ ဒီကယျဆယျရေးအစီအစဉျတှအေပျေါ IS အစှနျးရောကျတှရေဲ့ အန်တရာယျလညျး ရငျဆိုငျလာရနိုငျပါတယျခငျဗြာ။
တူရကီရောက် အာဖဂန် ဒုက္ခသည်များ
တာလီဘန်အုပ်ချုပ်ရေးနဲ့ အမျိုးသမီးတွေရဲ့ အနာဂတ်
အာဖဂန်လေဆိပ်အနီး ထိန်းမနိုင်သိမ်းမရ ဖြစ်နေတဲ့အတွက် အမေရိကန်ကို တာလီဘန်တွေဝေဖန်
အာဖဂနစ္စတန်က တပတ်အတွင်း လူ ၂ သောင်းခွဲကျော် အမေရိကန်ကယ်ထုတ်
အာဖဂန်အစိုးရသစ် ဖွဲ့စည်းရေး တာလီဘန်ပြင်ဆင်
အာဖဂနစ္စတန်က ထွက်ခွာမယ့်သူတွေ လုံခြုံရေး တာလီဘန်တွေကတိပေး
အာဖဂန်မှာ အမေရိကန်တပ်တွေ ရုပ်သိမ်းရေး ဆုံးဖြတ်ချက်ပေါ် Biden ရပ်တည်